Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Hotels & Ebe ntụrụndụ » N’ebe ezumike akpụkpọ ụkwụ niile ị chọrọ bụ ịhụnanya
Akụkọ Antigua & Barbuda • Akụkọ Bahamas Breaking • Akụkọ ọhụrụ Barbados • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Caribbean • Akụkọ Grenada na -agbasa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ gbasara Jamaica • Akụkọ okomoko • News • Resorts • Agbamakwụkwọ Romance Honeymoons • Akụkọ Lucuc na -agbasa • Tourism • Ego njem | Atụmatụ njem • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ dị iche iche
Resorts Sandals in the Caribbean resorts na-enye ebe ezumike kachasị mma maka ịhụnanya maka ndị di na nwunye nwere ịhụnanya.
Kporie ezumike ezumike niile kachasị mma na Sandals Resorts na Caribbean wee hụ ihe kpatara ha ji enye ezumike kachasị ịhụnanya maka ndị di na nwunye nwere ịhụnanya nwere njirisi mara mma karịa ebe ezumike ọ bụla ọzọ dị n'ụsọ osimiri.
Sandals Resorts na-egosipụta ngwungwu niile jikọtara ụwa niile.
Di na nwunye nwere ike nwee ọmarịcha osimiri mara mma na-acha ọcha, aja 5-kpakpando Global Gourmet ™ iri nri, ụlọ bara ụba, mmanya na-enweghị nsọtụ, egwuregwu mmiri na-atọ ụtọ, na ndị ọzọ.
Akpụkpọ ụkwụ abụwo Companylọ Ọrụ Na-eduzi Ndị Na-eduzi forwa maka afọ 25 n'usoro site na World Travel Awards.
Were ya na ị na-erute n’ụlọ ezumike nanị n’ọdụ ụgbọelu, ebe ụgbọ njem na-eche gị ga-ebupụ gị, ma banye ebe a na-enwe ezumike bụ́ ebe a gụnyere ihe nile. Jiri anya nke uche gị hụ nnwere onwe nke ịbanye n'ụlọ oriri na ọ resortụ anyụ ọ bụla na-enwe ọ whateverụ n'ihe ọ bụla palette gị chọrọ, na-esonye na mmemme ndị na-achọghị ka ị dọpụta kaadị akụ gị ma ọ bụ bịanye aka na taabụ, yana ịgụta ọnụ ma ọ bụ ego. Nke ahụ bụ ezigbo obi ụtọ nke ezumike niile. Na Akpụkpọ ụkwụ, ihe niile na-achị achị kacha elu.
Resortsọ mmiri Sandals ọ bụla na-anọdụ n'ụsọ osimiri dị egwu na isii n'ime ebe agwaetiti ndị mara mma kachasị mma na Caribbean, mpaghara a ma ama maka oke aja na-acha ọcha na-enweghị nsọtụ, mmiri mara mma turquoise na ọdịda anyanwụ. Site na Jamaica na-ekpo ọkụ reggae usu ka Bahamas 'ọkaibe kụrụ si na Saint Lucia si ugwu mgbawa na Antigua si adọrọ adọrọ.
'Slọ ndị dị na Caribbean
Akpụkpọ ụkwụ nwere ụlọ ndị dara oké ọnụ ebe ha chere maka ihe niile iji mee ka ezumike laghachi zuru oke maka ndị di na nwunye hụrụ n'anya. Site na nnukwu ụlọ mmiri na mmiri dị egwu na nnukwu ihe ngosi 180, iji nwee Skypool Butler Suites na ọdọ mmiri na-enweghị njedebe na Rondoval Suites pụrụ iche, Signlọ Mbinye Aka nke akpụkpọ ụkwụ ga-eme ka mmekọrịta dị elu.
Agwaetiti ndị dịpụrụ adịpụ
Naanị ndị ọbịa na-agagharị agagharị na Sandals na-enweta ezumike 2 na-ekpo ọkụ maka ọnụ ahịa otu. Emi odude ke Akpụkpọ ụkwụ Royal Caribbean na Akpụkpọ ụkwụ Royal Bahamian dị nnọọ nkeji si isi resotu.
Ọdọ mmiri na-adọrọ adọrọ na Ikuku nke Romance
Gbanwee obi iru ala nke ọdọ mmiri na-egbuke egbuke. Zuru oge nke oge ịnọ jụụ n'etiti udo nke ọdọ mmiri a na-akwụghị ụgwọ, nwee ume nke mbinye aka na-egwu mmiri, ma ọ bụ nwee ọmarịcha ọdọ mmiri anyị na-abanye na mmiri nke bụ ebe obi obi ụtọ nke ebe ntụrụndụ anyị. Onye ọ bụla n'ime ọdọ mmiri anyị nwere àgwà pụrụ iche na ọtụtụ n'ime ha bụ naanị nzọụkwụ site n'oké osimiri.
Agbamakwụkwọ & Mmanụ a Honụ na ebe ezumike kachasị mma n'ụwa
Na Akpụkpọ ụkwụ, akụkọ ịhụnanya ndị ọbịa pụrụ iche ma pụọ ​​iche… na agbamakwụkwọ ha dịkwa. Ọ bụ ya mere ha ji dochie ndokwa agbamakwụkwọ na ndị na-eme atụmatụ agbamakwụkwọ, na-eme ezigbo ahụmịhe nkeonwe. Agbakwunyere ihe mgbakwunye niile iji mee ụbọchị pụrụ iche pụrụ iche. Ya mere, gwa Sandal nrọ gị, ha ga-eweta ya na ndụ.
Akpụkpọ ụkwụ ezumike niile nke Sandals niile gụnyere: